By Unknown 12:04 PM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
မြတ်ကြည်က ငွေရှာတာထက် စုဆောင်းတဲ့ဘက် အားသန်တဲ့သူမျိုးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်မိတယ်။ တကယ်တော့အပင်ပန်းခံရှာထားတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားလို့ စုဖြစ်တာပါ။
အလေ့အကျင့်ဖြစ်သွားရင် ဝါသနာပါပါသွားမယ့် မြတ်ကြည်ရဲ့ ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ (ကလေးအကွက်) တနိုင်တပိုင် စီမံခန့်ခွဲနည်းလေးတွေ အသုံးဝင်လိုဝင်ငြား ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါညော်။
Budget ခွဲ 💸
မြတ်ကြည်ရဲ့ သုံးစွဲတဲ့ budget မှာ မဖြစ်မနေသုံးရယ်၊ leisure (အပျော်အပါး)သုံး ရယ်ဆိုပြီးတော့ ၂ မျိုးခွဲထားပါတယ်။ တစ်လသုံးမယ့် budget ကို accountထဲချန်၊ ကျန်တာအကုန် saving ထဲထည့်တယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ amount ကို ကျော်သုံးလေ့မရှိဘူး၊ တနေရာမှာတိုးသုံးမိရင် တခြားနေရာမှာ လျှော့တယ်။ ဥပမာ ဒီလမှာ လည်တာပတ်တာများသွားပြီဆို အစားအသောက်ဖက်မှာ လျှော့သုံးတာမျိုးပေါ့။
ဘာပဲဝယ်ဝယ်၊ ဝယ်မယ်ဆို ပြန်မေးတာ ၃ ခုရှိတယ်။
၁. ဒါက ကိုယ့်အတွက် တကယ်လိုအပ်လား (မဝယ်ပဲရော နေလို့ဖြစ်လား)
၂. ဒါမျိုး ဆင်တူ / ခပ်ဆင်ဆင် ကိုယ့်မှာရှိပြီးသားလား
၃. ပေးတဲ့ဈေးနဲ့ တန်ရဲ့လား
ဈေးကြီးပေးရပြီး ဈေးနဲ့မလိုက်တဲ့ ၊ ဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်ဝယ် ရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးဆို ထားခဲ့တယ်။ ဘုတ် (ပစ်ချသံ)
လက်ထဲမှာ ငွေပို ဘယ်တော့မှ မထားလို့ အမြဲဒုက္ခရောက်ပေမယ့် ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်လည်း စိတ်မညစ်ရဘူး။🤣 အတိုးကြောက်လို့ အရစ်ကျလည်း ဘယ်တော့မှ မဝယ်ဘူး။ တချိန်ချိန်မှာ တန်ဖိုးမြင့်မလာရင်တောင် ကျ မသွားမယ့် အရာလေးတွေ မြှုပ်နှံဖြစ်တယ်။ (ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊ ကြက်ဥ၊ကြက်သွန်၊ အာလူး)
အဲလို ချွေတာတော့ လူဖြစ်ရတာတန်ရဲ့လားမေးရင် အဖြေက တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ခံယူချက်ပေါ်မူတည်မှာပါ။အမေ့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ "သုံးသလောက်ရှာနိုင်ရမယ်"တဲ့။ ကိုယ်က အမေ့လို အရှာမတော်လေတော့ "သုံးမိသမျှ အလကားမဖြစ်စေရ" ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပြောင်းလိုက်တယ်
ဖဘမှာတင်တဲ့ပို့စ်လေး ဒီမှာ လာသိမ်းပါတယ်
Photo caption: မနှစ်က အဖေ့ကင်မရာရိုက်ချက်မှာ လန်ထွက်နေတဲ့ စာရေးသူတို့သားအမိ
By Unknown 4:38 PM ဖက်ရှင်
ကမ်းခြေလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ရင်ခုန်သံ မမြန်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိမလဲ?
ခရီးသွားရတာ ကြိုက်တဲ့ မြတ်ကြည် ခရီးမထွက်ဖြစ်တာ နှစ်တွေပေါက်လို့ အရင်နှစ် နိုဝင်ဘာလက သွားဖြစ်တဲ့ beach wedding ခရီးလေးကို ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
၀တ်စုံ ထည့်သွားတာက ၄ စုံထဲ
ကမ်းခြေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို မပါမဖြစ်က အဖြူရောင်ပါ
လက်ပတ်တဲ့ accessory လေးက ပုသိမ်ရွှေမြင်းပျံကဝယ်တာ
ကျန်တာကတော့ print လေးတထည်
Wedding မှာ ဝတ်ဖို့ တထည်
ဂါဝန်က MDS က
ရေကူးဝတ်စုံ တထည် အဲဒါပဲ ယူသွားတယ် :)
ဗိုက်ခေါက်လေးလည်း မပေါ်ဘူး 😬
Sunscreen လေးလည်း မမေ့နဲ့နော်
သဲထဲလျှော်သွားဖို့ slipper လေးလည်းလိုတယ်
ကမ်းခြေမှာ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ပျော်လိုက်ပါ :D
By Unknown 9:00 PM အာဒမ်နဲ့ပတ်သက်၍
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အားနည်းချက်က အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့အခါ ချစ်သူဘဝကလိုပဲ သူ့အပေါ် ကိုယ် ဆိုးတိုင်းနွဲ့တိုင်း သည်းခံလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတာပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့ နှစ်အကြာကြီး တွဲတဲ့ ချစ်သူတွေ မယူဖြစ်ကြသလဲ။
ယောဤားလေးတွေရဲ့ စိတ်ရှည် သည်းညည်းခံမှုဆိုတာ လူတစ်ယောက် အပေါ်နှစ် အများကြီးမခံပါဘူး။ ရှိရင်တောင် တော်တော်ရှားပါတယ်။ အဲလိုသဘောသဘာဝကို မသိပဲ သက်တမ်းကြာလာတာနဲ့ အရင်တိုင်း အာဏာပါဝါပြတာ မာန်လေးတွေ မလျှော. တဲ့အခါ ရက်ရော ကြည်ဖြူတဲ့ဆီ ရောက်သွားတာပါပဲ။
အိမ်ထောင်တခု သာယာဖို့ တည်တံ့ဖို့ဆိုတာ နှစ်ဦးလုံးနဲ့ဆိုင်ပေမယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုင်တွယ်နိုင်မှုက ပိုအက္ခရာ ကျပါတယ်။
ဘာလုပ်လုပ် သူပဲမှန်တယ် အရှုံးပေးရမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အများရှေ့မှာ သူတို့ကို ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ respect ထားပေးတာမျိုးပေါ့။ အိမ်ထောင်ကျလာတဲ့အခါ သူတို့က dorminant role ကို အမြဲလိုလို ယူချင်သူများသား။
အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆို စိတ်ကိုက ကလေးမဆန်တော့ဖို့ ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ နားလည်မှုတွေက သ၀န်တိုမှု တွေထက် ပိုလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။ မိခင်လို မေတာ မျိုးနဲ့ ချစ်စေချင်ကြတယ်၊ သူတို့ကို ချုပ်ခြယ်တာ ဆရာလုပ်တာတော့ မကြိုက်ပြန်ဘူး၊
သည်းခံပါ အနိုင်ကျင့် မခံပါနဲ့
ထိန်းမတ်ပေးပါ မပြု ပြင်ပါနဲ့
အဲလိုမသဲကွဲတဲ့ အစွန်းနှစ်ခု ကြားထဲ ကိုင်တွယ်၇တာမျိုး ....
ယောကျာ်းယူတယ်ဆိုတာဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ကလေးကြီးကို သူအမေဆီက တာဝန်လွှဲပြောင်းယူလိုက်တာပါပဲ။ ဘယ်လောက်ရင့်ကျက်ပါတယ်ပြောပြော
၀ယ်တဲ့ ဖိနပ် မတော်တဲ့အခါ
By Unknown 8:28 PM ဖက်ရှင်
မြတ်ကြည်ရဲ့ မဝယ်ရမနေနိုင်ထဲမယ် ဖိနပ် က ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်။ တော်တော် မတော်တော် စွတ်လို့ရရင် ကောက်ဝယ်၊ ပြီးမှ ဖိနပ်တွေပေါက်၊ ခြေချောင်းတွေ ကုတ်ပြီးသွင်းထားတော့ ညဆို ကြွက်တွေတက်။
ဒီပို့စ်မှာ မြတ်ကြည် နောက်ပိုင်း သိလာတဲ့ တော်ရုံတန်ရုံ ကျပ်တဲ့ ဖိနပ်ဆို မနာမကျင် စီးနိုင်တဲ့ tips လေးတွေ ပြောပေးပါမယ်နော်။
၁. မဝတ်ခင် တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်ကြိုပြီး စက္ကူ စ တွေကို ရေဆွတ်ပြီး shoe ထဲကို ဖိသိတ်နိုင်သမှ ဖိသိပ်ထားပေးပါ။ နောက်နေ့ ရေလည်းခြောက်ရော ကိုယ့် ခြေထောက်နဲ့ အတော်ဖြစ်သွားရော။
၂. ဒီနေ့မှ ကောက်စီး၊ ဒီနေ့ တနေကုန်လျှောက်ဆို ဖိနပ်အသစ်က ကျပ်တာနဲ့ အနည်းနဲ့ အများတော့ ပေါက်ကုန်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မနက်ဖြန် အစိန်ကြီး ဝတ်မယ်ဆို ဒီနေ့ကြို ပြီး ခနတဖြုတ် အိမ်ထဲဖြစ်ဖြစ် ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက် လုပ်ပေးပါ။
၃. စီးစီးချင်းနေ့ ခြေချောင်းလေးတွေ ဖိနပ်ပေါက် သက်သာအောင် glycerine ဒါမှမဟုတ် powder ဖြူးပြီး စီးလို့လည်းရပါတယ်နော်။ ဖနောင့် အတွက် ပေါက်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ဂွမ်းစ ပါးပါးလေး ခံပေးလို့လည်းရတယ်။
ဒီလောက် ကြိုတင် ကာကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဖိနပ်ပေါက်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော် နည်းသွားလောက်ပါပြီ။ အိမ်မှာ ဝယ်ပြီး ဖိနပ်ပေါက်လို့ ချောင်ထိုးထားတဲ့ ဖိနပ်တွေရှိရင် ပြန်ထုတ်ပြီး second chance ပေးလိုက်ပါနော်။
what I wore - Chilli (Red Pump)
Work it, Swork it!
By Unknown 8:43 PM အစားစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း (Diet and Exercise)
လတ်တလော နေ့စဉ် ဦးစားပေးဖြစ်တဲ့ အရာထဲမှာ လေ့ကျင့်ခန်းရယ်လို့ ပါလာပါတယ်။ ငယ်ငယ်က အပျင်းတစ်ခဲ့သမျှ အသက်ကြီးလာတော့ ဗိုက်လေးက ထွက်စပြုလာ၊ တင်လေးက လျှေစပြုလာတဲ့ ဇရာ၊
အဲဒါကို လက်မခံချင်သေးတာနဲ့ လုပ်ဖြစ်တာလည်း ပါတာပေါ့နော်။
စစချင်းကတော့ အလုပ်က ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ My Gym မှာ သွားက ဖြစ်တယ်။ အက က အပြန် အလုပ်သွား၊ ကွက်တိပဲ။ ပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ် ပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်တယ်။ ဗိုက်လေးလည်းချပ် လူလည်း ပေါ့ပါး၊ ယုံကြည်မှုလည်း တက်စေတာ အမှန်ပဲ။ K-pop, အင်္ဂလိပ်သီချင်း, သိတာတွေရော၊ မသိတာတွေရော ဆရာမသင်တာ လိုက် က၊ ဟုတ်နေရော။
My Gym မှာ ကတုန်းက
Morning က နေ Evening နဲ့ Night Duty လည်း ပြောင်းရော၊ အဲ့မှာ အခက် စတွေ့တော့တာပဲ။ တချို့ ပတ်တွေ လာလို့မရ၊ လာလို့ရ ၊ အက က ပျက်လိုက်တာနဲ့ အသစ် သင်တာတွေ နောက်နေ့မှာ လိုက်မမီတော့ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း pro ကြီးမဟုတ်တော့ တနေ့သင်တာ တနေ့ မနည်း လိုက် က နေရတာ။ အိမ်မှာ ငုတ်တုတ် ထိုင်လိုက်တာ တလ လောက်လည်းဖြစ်ရော မကခင်က ထက်တောင် ပိုဝ လာ။ ကတုန်းက ကလို့ ဆို များများ စားတာကိုး၊ အကလည်း ရပ်ရော စားတဲ့ အကျင့်က ဖျက်မရ။ စိတ်ဓာတ်ကျ။
၀လာ ၀လား(
ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဘာကိုယ် အိမ်မှာ လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလေးလိုက်ရှာရတယ်။ Swork it ဆိုတဲ့ application. မြတ်ကြည်တို့လို beginner တွေ အတွက် အရမ်း အသုံးဝင်တယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၄မျိုးပါတယ်
Cardio ရယ် strength ရယ် yoga ရယ် stretching ရယ်. Strength မှာမှ ဗိုက် ၊လက်မောင်း၊ တင် ကိုယ်ကြိုက်တာရွေးဆော့၊ သူ ပြတဲ့အတိုင်း လိုက်ကြည့်လုပ်ရုံပဲ။ အချိန် timer လေး ချိန်၊ လုပ်ပြီးသွားရင် calorie ဘယ်လောက် လောင်လဲ ဆိုတာပါပြပေးတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး မလုပ်ချင်ရင်တောင် yoga လေးလုပ်၊ အဆင်ပြေတယ်။
၇လာဒ်က သွက်လက် ပေါ့ပါးလာတယ်၊ အသားကျစ်လာတယ်၊ နေလို့လည်းကောင်းလာတယ်
No gym, no excuses. Gym သွားဖို့ အချိန်မရှိလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြ မနေပါနဲ့တော. အိမ်မှာပဲ ဆော. လို့ရတယ် ဘာကရိယာ မှလည်းမလိုပါဘူး။ တစ်ပတ် ၄ ရက် လောက် ဆော့နိုင်ရင်ပဲ သိသာပါတယ်၊ ကိုယ်လှဖို့ ကိုယ် ကျန်းမာဖို့ ကိုယ့်မှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့း)
နောက်ရက်တွေ အဆင်ပြေရင် Diet အကြောင်းလေး တင်ပေးပါမယ်နော်
By Unknown 4:20 PM ဖက်ရှင်
ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဝတ်ထား ဆင်ယင်ထားတဲ့ အရောင်တွေဟာ ဖက်ရှင်တို့၊ စတိုင်လ် တို့ထက်ပိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ဆောင်ထားကြပါတယ်လို့ How to makeaMillion Dollar Impression ရေးသားသူ Lynda Goldman ကဆိုပါတယ်။ အရောင်တွေဟာ မိမိတို့ တောင်မသိနိုင်ပဲ မသိစိတ်ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက် စိတ်အခြေအနေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့သတ်အခြေအနေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အောင်မြင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ဆောင်တဲ့အရောင်။ အလုပ်ဝင် အင်တာဗျူးအတွက် navy ပြာရောင်က အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ ဝတ်ထားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်။ navy blue ဝတ်ထားရင် တခြားအရောင်တွေထက် အလုပ်ရနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
သစ္စာရှိမှုဖော်ရွေမှုတို့ကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အပြာကို logo သုံးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။facebook တို့ IBM တို့ပေါ့။
သြဇာရှိပြီး ကိုယ့်ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ အထက်လူကြီးတွေ အရောင်နဲ့တင် လန်သွားစေချင်ရင် အနီရောင်ကိုဝတ်ဆင်ပါ။ ကိုယ့်ကို ထင်းခနဲ လင်းခနဲ သတိထားမိစေ၊ အထင်ကြီးစေပြီး powerful ဖြစ်စေတဲ့ အသွင်ဆောင်ပါတယ်။ အနီရောင်ကို ကြပ်ကြပ်ထုပ်ထုပ်နဲ့ တရားလွန်ကြီးမဆင်မိဖို့တော့ သတိထားရပါမယ်။ အနီရောင်က ပုရိသတွေရဲ့ စိတ်ကို လှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့ အရောင် ဖြစ်လို့ပါတဲ့။
အလုပ်ထဲမှာ သူလိုကိုယ်လိုပဲ နေချင်သူလား။ အရောင်မှိုင်းမှိုင်းတွေ ရွေးဝတ်ပါ။ ဥပမာ။ ။မီးခိုရောင်၊ ကာကီရောင်၊ အသားရောင်။ Fashion Network Experts တည်ထောင်သူ Sheila Dicks က အလုပ်မှာ ကိုယ့်ကိုချည်းပဲ အာရုံစိုက်၊ ကိုယ့်ကိုပဲ အပိုအလုပ်တွေ ဖိခိုင်းနေရင် အရောင်တောက်တောက်တွေ ခဏဖယ်ပြီး အမှိုင်းတွေဝတ်ဆင်ပါတဲ့။ တခြားလူတွေနဲ့ ရောသွားလို့ ကိုယ့်တယောက်တည်း အခိုင်းခံရတဲ့ ပြဿနာမှ လွတ်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အမဲရောင်ဝတ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသွားပြီး စမတ်ကျ သွားတယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေမှာ အမဲရောင်ဟာ တသီးတသန့်ပဲ နေထိုင်လိုတဲ့အသွင် ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိဖို့လိုပါတယ်။ confidence ကိုယ့်ကိုယ်ပဲရှိစေပြီး သူများတွေ အမြင်ကြည်စေတဲ့ အရောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အနက်ရောင်ဝတ်ထားရင် အကူအညီတောင်းရခက်တယ်တဲ့။
အခြား အရောင်လေး တွေအကြောင်းတော့ run through ပဲ ပြောပါတော့မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်မှာ အကူညီပေး သံလိုက်တပ်ထားသလိုမျိုးပါပဲ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အကူအညီတောင်းချင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဆီပဲ တဝဲဝဲတလည်လည်နဲ့ လာလုပ်ခိုင်းနေပါလိမ့်မယ်။ အဖြူရောင်ဝတ်တဲ့သူဆို အားကိုးချင်ကြတယ်။ အကူညီတောင်းလိုကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ရှေ့နေတို့၊ ဆရာဝန်၊ ဆရာမ၊ သူနာပြုတို့ကို အဖြူရောင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်ရင့်တွေက လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ရှေးရိုးဆန်ခြင်း၊ အဆင့်အတန်းရှိခြင်းကို ဖော်ပြပြီး ပိုလင်းတဲ့ အရောင်တွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သက်တောင့်သက်သာနေလိုခြင်း၊ သွက်လက်ခြင်းကို ဖော်ပြပါတယ်။
ပန်းရောင်ဟာ အမျိုးသမီးတွေချည်း ဝတ်တဲ့အရောင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပန်းရောင်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်ခြင်း၊ confidentရှိခြင်း၊ စွန့်စားလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့အတူ ပြောဆို ဆက်ဆံရလွယ်ခြင်း စတဲ့ အသွင်ကို ဆောင်ပါတယ်။
မြတ်ကြည် အကြိုက်ဆုံးအရောင်။ ခန့်ညားထည်ဝါမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လုပ်ရည် ကိုင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ သူအနေနဲ့ မြင်စေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ အသွင်ရချင်ရင် ခရမ်းရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါနော်။
အဝါရောင်ဟာ ဝတ်ထားသူကို ပျော်ရွှင်မှု ပေးသလို ဘေးကလူတွေကိုလည်းအပျော်ကူးစက်စေပါတယ်။ အစိမ်းဘက်သန်းတဲ့ အဝါရောင်တွေကတော့ ကိုယ့်ကို နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။
လတ်တလော ဖက်ရှင်လောကမှာ အညိုရောင်ဟာ ခေတ်သစ်အနက်ရောင် (new black) ဆိုပေမယ့် fitting ကျကျ မဝတ်ဘူးဆို အားလူးသီးနဲ့ နင်လားငါလား ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ သူ့အရောင်ကို ရွေးချယ်မယ်ဆို တခြားအရောင်စိုစိုလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပေးပါ။ သူ့ချည်းပဲဆို စကိုယ့်ကို ဘယ်သူ့မှ စိတ်ဝင်စားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါက အရောင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြမ်းဖျင်းပြောပြထားတာပါ။ အရည်အချင်းသည်သာ အဓိကဆိုပေမယ့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးတဲ့ ခေတ်မှာ သူလိုကိုယ်လို အရည်အချင်းက မတိမ်းမယိမ်းရှိကြတာပါပဲ။ အလုပ် အင်တာဗျူးဖြေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် meeting ထိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ထင်းထွက်စေချင်သလား လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ချင်သလား အရောင်များရဲ့အထောက်အပံ့လေးဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
By Unknown 10:03 PM အစားစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း (Diet and Exercise)
Hollywood diet ဟာ သူ့နာမည်တဲ့တင်ကို လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ diet ပါ။ အလေးချိန်ကို ၁ ရက် ၂ ရက် အတွင်းကျချင်တဲ့ celebrities တွေဟာ ဒီdiet ကို အားကိုးကြပါတယ်။
သူ့မှာ 24 hour diet နဲ့ 48 hour diet ဆိုပြီး အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ။
သူ့ရဲ့လှည့်ကွက်ကတော့ တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ But, အချိန်တိုတစ်ခုထိပါပဲ။ Diet plan လို့တောင် ပြောလို့မရတဲ့ detox drink ပုံစံမျိုးပါ။ စားသုံးတဲ့ calorieကို ၂၀၀၀ ကနေ ၄၀၀ ထိ လျှော့ချပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၄ နာရီ diet ပဲဖြစ်ဖြစ် ၄၈ နာရီ diet ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဆုံးရှူံးသွားတဲ့ ပမာဏ အများစုဟာ ရေဖြစ်တာမို့ ရေများများ ပြန်ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။့ diet လုပ်နေချိန်အတွင်း သူ့drink ကလွဲရင် တခြားဘာမှစားခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့။
Hollywood diet လုပ်နေတဲ့အချိန်အတွင်း အလေးချိန်က ကျိန်းသေကိုကျတယ်။ ကျသွားတဲ့ အလေးချိန် ဘယ်က လာသလဲ? တစ်ပေါင်၊ နှစ်ပေါင်က တော့ အဆီက ဖြစ်မယ် ကျန်တဲ့ ပေါင်ချိန်တွေက ကြွက်သားပမာဏတချို့ ရယ် အူထဲမှာ ကပ်နေတဲ့ အစာဟောင်းတွေရယ်ပါ။ သူ့မှာပါတဲ့ enzyme နဲ့ သတ္တုတွေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ တွေက အူကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ သူ့ချည်းသက်သက်မဟုတ်ရင်တောင် အစာနဲ့တွဲပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ စုနေတဲ့ အဆိပ်အတောက် ဖယ်ရှားဖို့ အူသန့်ဖို့အတွက် သောက်လို့ရပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရတော့ hollywood diet က ပင်ကိုယ် အလေးချိန်ရဲ့ ပျန်းမျှ ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း ချပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၄.၅ပေါင်ကနေ ၁၆.၅ ပေါင်ထိပါ။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်ခန္ဒာကိုယ် အတွက် အဆင်ပြေမပြေကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။
ရေ၊ ပန်းသီး၊ rasberry၊ craberry၊ blueberry၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ vitamin A,B1,B2,B3,B6,B12,C,D,E၊ folic acid
နာနတ်၊ပန်းသီး၊လိမ္မော်၊ မက်မွန်၊ ငှက်ပျော၊ သံပုရာ vitamin AB2,B3,B6,B12,C,D,E၊ folic acid
သူတို့ကို အပြင်မှာ package နဲ့ရောင်းကြပါတယ်။ အမှန်တော့ vitamin tablet လေးတွေ၊ juice ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် သစ်သီးတွေ ဝယ် blender နဲ့မွှေပြီး သောက်လို့လည်းရပါတယ်။
အားသားချက်ကတော့ ၀ိတ်တကယ် မျာများကျတယ်
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ antioxidants နဲ့ သစ်သီးတွေပါဝင်ပါတယ်။
အားနည်းချက်က အချိန်တိုလေးပဲ သုံးဖို့သင့်တော်တာရယ်၊ သူ့ diet အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်သောက်သောက် ဗိုက်ဆာမှာရယ်၊ diet ပြီးလို့ ပုံမှန်ပြန်စားရင် နဂို ပေါင်ချိန်ကို အချိန်တိုအတွင်း ပြန်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Hollywood diet က အကုန်လုံးအတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မနက်ဖြန် သဘက်ခါ ပွဲသွားစရာရှိခါမှ ရှိတဲ့အကျီင်္ိက မတော်၊ ထပ်လည်းမဝယ်ချင် ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးကို သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်။
Easy Gradient Eye
By Unknown 12:24 PM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
Eye makeup လေးတွေ ကိုယ့် ဘာသာ သာ ပြင်တာ တဆင့်ချင်းရိုက် ပြီးမတင်ဖြစ်တာ တော်တော် ကြာပြီ။ ဆန်းဆန်းပြားပြား ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အခုမှ စပြင်မယ့် ညီမလေးတွေ အတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
သက်တံ့ထဲက ကပ်လျက် အရောင်လေးတွေမို့ အရောင်ပြေး ပုံလေး ဖြစ်တာကို သဘောကျတာ :) ( ကွကိုယ်ပြော)
1. primer တင်ပါ။ မျက်လုံး ဘာအရောင်ဆိုးဆိုး မျက်လုံးပေါ် အရောင်ထွက်ချင်ရင် ဒါလေးအရင်တင်ပါလို့။
2. မျက်လုံး အတွင်းထောင့်ကို အဝါရောင်လေးဆိုး၊ အလယ်ကို အစိမ်း၊ အပြင်ဆုံးကို အစိမ်း တင်လိုက်ပါနော် ( shadow palette ထဲမှာ ပါတဲ့ အတံလေးနဲ့ပဲ ခြယ် အဆင်ပြေတယ်)
အောက်မျက်ခမ်းကိုလည်း ခုန အစီအစဉ်တိုင်း လိုက်ထပ်ထားလိုက်တယ်)
3. liner လေးလိုက်၊ mascara လေးဆိုး
ဒီ look အတွက် သုံးထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေပါ
ပိုစ့်က ရေးတာ တဝက်တပျက်နဲ့ ၄လ လောက်ကြာသွားတယ်။ :D နေရာသစ်မှာ အခြေချတာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပေမယ့် စွန့်စားရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ နောက်မှ အဲဒီအကြောင်းလေး ပြောကြတာပေါ့နော်။ :)
Vampy Eye ( non eyeshadow version )
By Unknown 5:43 PM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
မြတ်ကြည် နေရာပြောင်း တာနဲ့ အခြေချနေရတာနဲ့ blog လေးနဲ့ ဝေးပြန်တယ် ဆိုပါတော့။ အလုပ်အသစ်က နားချိန်သိပ်မရှိသလို ပင်ပန်းတော့ ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဘာမှသိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ သင်္ကြန်ပိတ်ရက် သုံးရက်ရတော့ အားယူပြီး ပို့စ်အသစ်လေး ရေးတင်လိုက်ပါတယ်။
အပျိုး နည်နည်းများသွားပြီ။ :D
ဒီနှစ်အတွက် hit color က marsla အရောင် ( မျက်စိထဲတော့ ကြက်သွေးရောင်နဲ့ ဆင်သလိုလို ပဲ) ဖြစ်တဲ့ အပြင် vampy look လို့ ခေါ်ကြတဲ့ မျက်လုံးကို vampire လို အနီရောင် ခြယ်တာ ခေတ်စားလာပါတယ်။
ပိတ်ရက်လေးတိုက်တုန်း ခေတ်နဲ့အညီလိုက်ပြင်ကြည့်ဦးမှ အားခဲလိုက်တာ။ ခက်တာက မြတ်ကြည်ဆီမယ် eyeshadow မှာ အဲ့ အရောင်မရှိဘူး။ ဟိုမွှေဒီနှောက်နဲ့ တိုနီမိုလီက ဝယ်ထားတဲ့ lip tint မျက်လုံးပေါ်ကောက်တင်လိုက်တာ result က အားရစရာပဲ။ အရည်ဆိုတော့ blend ရလည်းလွယ်တယ်။ တစ်ထပ်တည်းကျ အရောင်ဖျော့နေတာနဲ့ နှစ်ထပ် တင်ဖြစ်တယ်။ vampy နဲ့တူအောင် အောက်မျက်ခမ်းပါ အနီရောင်တင်ပြီး အပြင်ထောင့်ကို အနက်ရောင်နဲ့ liner လိုက်ထားပါတယ်။
တကယ်ဆို အဲဒီ liptint က ၀ယ်ပြီး မဆိုးပဲထားထားတာ တော်တော်ကြာပြီ။ ပြန်အသုံးဝင်သွားတယ် ဆိုရမှာပေါ့နော်။ ပျိုမေတွေလည်း liptint တွေ ၀ယ်တားခဲ့သည်ရှိသော် ဒီlook လေးကို လက်တည့်စမ်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့။
မြတ်ကြည်ရဲ့ liptint - Tony Tint Delight
Babyliss Curl Secret ကို လက်တည့်စမ်းခြင်း
By Unknown 8:42 PM ဆံပင်
အဲဒီ စက်လေးကို စစ တွေ့ကတည်းက စမ်းကြည့်ချင်တာကြာပြီ။ သူ့ပုံစံက သာမန် မြတ်ကြည်တို့တွေ့နေကျနဲ့ hair curler တွေနဲ့ မတူတာရယ်။ Review တွေက တော်တော် ကောင်းနေတာရယ်။ အဲဒါနဲ့ အဒေါ်ခရီးသွားတော့ မှာလိုက်တာ။
Hair Awards Women's Weekly လို့ ကပ်ထားတာပဲ
သူ့မှာ စက်အပြင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ ဖော့ချောင်းလေးထည့်ပေးထားတယ်။ setting ချိန်လို့ရတဲ့ ခလုတ်လေး ၃ မျိုးပါပါတယ်။ R A L ( curl direction - right, alternate, left) I II III (အပူချိန်)08 10 12 s (အချိန် timer) ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်။
ဆံပင်ကို နည်းနည်းချင်းယူပြီး မြောင်းထဲထည့်လိုက်ရင် စက်က ဂျလိဂျလိ ဂျလိန်းဂျလိန်းဆိုပြီး ဆံပင်ကို အထဲ လိပ်သွင်းသွားရော။ ကိုယ် set လုပ်ထားတဲ့ စက္ကန့် အတိုင်း ဥပမာ ၁၀ စက္ကန့်ဆို တီ တီ တီ တီ ၄ ချက်အော် နောက်ဆုံး တစ်ချက် ၃ ခါဆက်တိုက်မြည်ရင် လက်ကိုင်ဖိထားတာကို ဖြည်လိုက်ရုံပဲ။ မတော်တဆများ ဆံပင်တွေ ညပ်သွားခဲ့ရင် ဆိုပြီး အတွေး ဝင်သွားခဲ့သေးတယ်။ ပြီးသာပြီးသွားတယ် အဲလိုတော့ မရှိလိုက်ဘူး။ :D
မနေ့က : စမ်းသပ်ရင်း ရိုက်
လက်ညောင်းတော်တော် သက်သာသွားတယ်။ အရင် curler wand အချောင်းတွေဆို ညှပ်လိုက် လိပ်လိုက်နဲ့။ အခုတော့ သူ့ဟာသာသူ စက်ထဲ လိပ်သွားတာဆိုတော့ ထည့်ပြီး ကိုင်ထားရုံပဲ။
မြတ်ကြည်ဘာသာ အရင်က ကောက်တာထက်တော့ ကောက်သား ညီတယ်။ Pro ဖြစ်စရာ မလိုဘူးပေါ့နော်။ ကောက်နေကျ မဟုတ်တဲ့ မြတ်ကြည်တို့လို beginner တွေအတွက် တော်တော် အဆင်ပြေတယ်။
သူ့မှာ ရေးထားတာ ညှပ်တဲ့ side အပါး နဲ့ အထူ နှစ်ဖက်မှာ ဦးရေနဲ့ နီးတဲ့ဘက်မှာ အမြဲ အပါးဘက်ကို ထားပါတဲ့။ အဲဒီမှာ ပြသနာက စတာပဲ။ သူပြောတဲ့ အတိုင်း လိုက်လုပ်တာ အလုပ်ဖြစ်တာက ဖြစ်လိုက်၊ မဖြစ်တာက မဖြစ်လိုက်နဲ့။ သူက အလုပ်မဖြစ်ရင် နည်းနည်းလေးပဲ ဆွဲလိပ်ပြီး ရပ်သွားရော။ ဆံပင်လည်း မကောက်တော့ဘူး။ အဲဒီအခါကျရင် သူပြောထားတာနဲ့ ပြောင်းပြန်လုပ်မှ အဆင်ပြေသွားတယ်။ အပေါ်ပုံမှာ မြတ်ကြည် ပြောင်းပြန် ဇောက်ထိုးကြီးကိုင်ပြီး လုပ်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ :P
အပျင်းထူပြီး ဆံပင် ထည့်တာ များသွားရင်လည်း မလိပ်ပြန်ဘူး။ ဂဂျိ ဂဂျိ နှစ်ခါလောက်မြည်ပြီး တစ်သွားရော။ နည်းနည်း ချင်းစီ ထည့်ရတော့ နည်းနည်း တော့ time consuming ဖြစ်တယ်။
Farrah Fawcett မဟုတ်ဘူး Farrah Fawmyat :P
မနက်ကထိ ကောင်းကောင်း ခံတယ်။ ညက ဖိအိပ်လိုက်တော့ ဖို့ရို့ဖားယား ဖြစ်နေတာနဲ့ ခေါင်းဖြီးလိုက်တာ။ ဒါလေးတော့ ကျန်သေးတယ်။
Today After ဘီးဖြီး
မြတ်ကြည်တို့လို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထိုင်ကဏိုဏ်း ကျကျ မကောက်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဝယ်ရတာ တန်တဲ့ ပစ္စည်းလေးလို့ပြောပါရစေ။ ရိုးရိုး curler တွေထက် ထူးကဲပြီးတော့ လှသွားတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ review လေးက ဝယ်ရင်ကောင်းနိုး မဝယ်ရင်ကောင်းနိုး စဉ်းစားနေသူတွေအတွက် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အသက်ကို ၁၀ နှစ် မက ဖြိုပေးမယ့် ဆံပင်ပုံစံများ
Serum အကြောင်း သိသမျှ
Taking care of အိတ်